Cabsi amni-darro oo caawa ka jirta degmada Guriceel | KEYDMEDIA ONLINE
Cabsi amni-darro oo caawa ka jirta degmada Guriceel
Cabsi amni ayaa caawa laga so sheegayaa magaalada Guriceel, kadib markii Kooxda Al-Shabaab soo degeen tuulo ku dhow degmada.
Guriceel, Soomaaliya - Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Kooxda Al-Shabaab, ay maanta gaareen degaanka Dabarre oo qiyaastii 28 Kiilomitir dhanka koofureed kaga beegan magaalada Guriceel.
Dabarre, wuxuu ahaa degaanka uu yaallay difaaca koobaad ee Urur-kii Ahlusunna Waljamaacah, kuwaas oo dhul badan ka xoreeyay Al-Shabaab, ka hor inta aan Xukuumaddii Kheyre, ka fara-maroojin maamulkii gobolka dhabayaaqadii 2019.
Cabsi xooggan ayaa caawa laga soo sheegayaa magaalada Guriceel, oo nadab lagu naaloonayay in ka badan 12 sano, kadib markii daqaallo kharaar oo ka dhacay 2008, looga sifeeyay Al-Shabaab.
Dadka degaanka ayaa sheegaya in Al-Shabaab, ay wataan gawaari dagaal, oo aan hore Galgaduud caan uga ahayn, mana jiraan wax dhaqdhaqaaq ah oo ay wadan ciidamada Galmudug oo looga hor tago duullaanka.
Tan iyo markii uu xilka Madaxweynaha Galmudug la wareegay Axmed Qoorqoor, hal sano iyo bar ka hor, majiro howlgal xooggan oo maamulkiisu ku qaaday Al-Shabaab, kuwaas oo la wareegay gacan ku heynta degaanno ay ka mid tahay Bacaadweyn oo dhacda Mudug.